.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Myanmar Love Songs Album
Myanmar Love Songs Album
ဒီ Album လေးကို အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ခံစားချက်ရှိတဲ့၊ အချစ် သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်
ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး သီချင်းလေးတွေ ၁၂ ပုဒ် စုပြီး လုပ်ထားပါတယ်။
ခံစားချက်ချင်း တူညီတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်..။
ဒီ Album လေးတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော် အချိန် ၅ ရက်လောက်ပေးပြီး လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ နားဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်..
Go to >> Myanmar Love Songs Album [ Web Page ]
Download >> Myanmar Love Songs Album [ Internet Shortcut ]
နောက်ခံ [ Background ] ပုံ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ထားတာပါ။
မှတ်ချက်။  ။ ဒီ Album က ကုတ်တွေကို လုံးဝ (လုံးဝ) ခိုးယူအသုံးပြုခြင်း မပြုလုပ်ရန် အထူး သတိပေးအပ်ပါတယ်။
ပြောထားတဲ့ ကြားထဲက အရှက်မရှိ ခိုးယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို သင်ကိုယ်တိုင် သိပါလိမ့်မယ်။
Posted by Thurainlin at 10:43
Labels: Flash Song Album, Mp3, Wallpaper